Eminye imikhosi yamalanga eSanta Rosa Sonoma County
Iiklasi ezili-10 zaseSanta Rosa eziphezulu
Lo nguBad Daddy weeNkampu zeeNgingqi. Abahlali baye baxhoma le nkampu yeHowarth Park iminyaka, kwaye ngoku bayayinina abantwana babo ukuze bahlekise. Akuyona nje inkampu, yinto. Imisebenzi ibandakanya ukukhwabanisa, ukugubha i-archery, iiprojekthi kunye nemiklamo yezobugcisa, kunye nokuhamba ukuya eSouth Lake ngosuku lokubhukuda. Ngobusuku boLwesine ubusuku obukhethekileyo bobusuku bonke. Okokuqala, abantwana kunye nabacebisi bapheka isidlo ngesidlo somlilo baze babambe ukusebenza kwentsapho kunye nabahlobo. Emva koko, balala phantsi kweenkwenkwezi. Iphulo: Ukuba eli lixesha lakho lokuqala, qaphela ukuba abantwana bazisa i-oodle yamacandi kunye nokutya okutyiwayo nokutya kunye nokwabelana ngexesha loqeqesho. Kwakhona, ukuba usayina ngokukhawuleza, iveki yo-4 kaJulayi ibonakala igcwalisa ukugqibela. Okanye, zibeke uluhlu lokulinda. Izicwangciso zitshintsha ngexesha lehlobo kwaye zihlala zikhanselwa. Ukongeza, i-Santa Rosa Recreation kunye neePaki ziqhuba ezinye iinkampu ezinkulu ezingazalanga ngokukhawuleza njengo-Wa-Tam.
I-Workshop yaseLustabout yaseTheater
I-Roustabout Theater, inkampani ehlala kwindawo ye-Wells Centre yezoBugcisa, iqhuba iNkqubo yoHlelo lweSikolo seNkxaso yabantwana abaneminyaka eli-11 ukuya kwe-18. Inkampu yosuku lwemihla iyaphela ekusebenzeni ngeveki yokugqibela. Ifilosofi kukuba imiboniso yebhokhwe kufuneka iveliswe ngendlela efanayo nokuveliswa kobugcisa. Ngoko, ukusetyenziswa kwekampu ehlotyeni kuhlobo lwe-Union light / crew crew, kunomyinge weengubo ezingaphezu kwe-70 (ezininzi zazo ezakhiwa kulo mboniso) kunye nezikrini ezingaphezulu kwe-100 / eziqhelekileyo ezibonakalayo ngexesha lokubonisa. Ngonyaka we-2008, inkampani iya kubeka umculo "iGrase."
Kwinto ethile encinci engundoqo, iMonoma County Children's Music iqhuba inkampu eyaziwayo ye-Children's Musical Theater nganye ehlobo, kwaye ekupheleni kweveki, abantwana bafaka ukusebenza kubazali, entsapho kunye nabahlobo. Iziko libuye liqhube nezinye iindidi zomculo kwizikolo zeenyanga ezili-19 ukuya kwi-12.
I-YMCA inika nekampu enhle yemidlalo (kunye nezinye iikampu zemihla ngemihla) njengokuba iParks neRe Rec ne-Drama yabo.
Usuku lwelizwe leSomoma School School Camps
I- Santa Rosa Symphony ibambe iikholeji ze-Summer Music Academy kwiSikolo seSuku seSizwe se-Sonoma. Ezi zifundo zomculo ezithandwa kakhulu okanye abaqalayo ngokuhamba phambili, eziphambili ukuya esikolweni esiphakeme. Iiklasi ziquka ama-wind ensembles, ii-orchestras zomculo, iiklasi zetambo, ukuxabisa umculo, i-theory kunye ne-orchestra. Zonke iiklasi kunye nee-ensembles ziphela ekusebenzeni kokugqibela.
Ngaphandle kweSikolo soMculo we-Summer, iSchool Day School School inikezela ngeenkampu / iiklasi ezibandakanya iindibano zokusebenzela, ibhaskball, ukuyila iwebhusayithi, umdaniso, isayensi, ukupheka nokunye.
Le nkqubo yokuphumelela amanqaku amaninzi kwiYunivesithi yase- Sonoma yasekuqaleni yenzelwe ikhosi yokucebisa kwabafundi abanesakhono. Kodwa, isuka kuvulekele kubo bonke abanomdla ekungeneni aba-4 ukuya ku-12 abagciniweyo abanqwenela ukufumana inkcazo ejulile efundiswa ngabafundisi abacebisi. Iikholeji zeentsuku ezi-3 neyesemva kwemva zidibaniswe kwiinkampu zemihla.
I-SSU ikwabonelela nge-Super Kids Camp. Iveki-elide, iiklasi zemihla ngemihla ze-6 - 12 ubudala ziquka uhambo lwentsimi, isiganeko esikhethekileyo kunye nokubhukuda kwiziko le-SSU. Kwaye, iyunivesithi inamaqela omdlalo wezemidlalo, kuquka i-volleyball, ibhola lebhola, ibhola yebholabhodi, i-softball, i-baseball, i-tennis, ukubhukuda kunye ne-polo yamanzi.
Kwakhona, i- Santa Rosa Junior College inikezela ngeprogram ye "College for Kids" kunye neendidi ezintle zezifundo, ezifana ne-astronomy, ukudweba i-robotics ye-Lego, ukuyila kwefashini kunye nokunye.
I-McDonald Ranch iyi-ranch yokusebenzela engekho inzuzo eyenzela ukunakekelwa kwezilwanyana ezilahliwe, ezingafunekiyo, okanye ezimele. Oku kudibaniswa nokufundisa abantwana ukuloba kwezilwanyana, ukugibela ihashe, ukukhwela kweebhokhwe, ukukhulisa izilwanyana ezintandane, ukuqeqesha, ukulungiswa kunye noxanduva lokuhlalisa izilwanyana. Kukho kwakhona ukukhwela, ukubhukuda, ukugubha umkhosi, ukuhamba kunye nokunye. Kugxininiswe kakhulu ekufundiseni abantwana ukuba babe ngabemi abanononophelo kunye neentlekele zehlabathi.
Oku kukuhle kumnandi ngexesha elidala elihle. Banika ukukhwela kwehashe, izifundo zezintambo, ezemidlalo, ezobugcisa kunye nokunye. Indawo yokuhlala kunye neenkampu zeentsuku ezikhoyo.
IHuman Society Camp
Amagosa ahamba emva kweemiboniso kwi-Humane Society aze ahlangabezane nezinja, iikati, onogwaja, izilwanyana zasemaplasini, ubomi baselwandle, izilwanyana ezinwabuzelayo, iintaka, ulwanyana kunye nezinye izilwanyana. Ukuhamba kwintsimi kungabandakanya: I-Institute Dog Dog, i-Safari West, iBodega Bay Marine Lab kunye nokunye.
Ifama yeFama e-Summerfield Waldorf School
Abantwana banandipha iintsingiselo zemihla ngemihla eplasini njengoko befunda ubuncwane bezilwanyana, umsebenzi wegadi, ukuvunwa kwefama okanye ukucoca kunye nokomisa amajikijolo, imifuno kunye neentyantyambo zelanga. Emva koko lixesha lezemidlalo kunye nexesha lobugcisa: ukwenza i-lavender wands, uphuphe imithwalo, ukwenza iphepha okanye ukugaya kunye nokomisa kwintambo.
Inkampu yokunyuka kweDwala kwi-Vertex Centre
Le gym yokunyuka kwamatye yasendlini inika iinkampu zasehlotyeni zasehlotyeni ezine iintsuku ezine ezineesigamu kwindawo yokuzivocavoca kunye nomnye uhambo lwentsimi ngaphandle.
IiNkqubo zoLonwabo eziHlaleni kwiiSanta Rosa Parks
Abantwana banako ukuhlaselwa kwiipaki ezininzi zedolophu kulo lonke idolophu apho banokuzonwabisa ngokukhuselekileyo, ukuzonwabisa kwangaphandle nabasebenzi abaqeqeshwe. kunye nemisebenzi ehleliweyo efana nemidlalo, ezobugcisa, ezemidlalo kunye nokunye. Amasayithi aseMasango avulekileyo ukusuka kwi-9 ukuya ku-11: 45 ekuseni nakwiindawo zasemva kwemini zivela ngo-1: 30 ukuya ku-4: 15 ebusuku. Zonke iziza zivaliwe ngoLwesithathu kwiintlanganiso ze-"Wild Wednesday". I-Santa Rosa yoLonwabo kunye neePaki ziqeqesha abacebisi beenkampu kwiindawo ezikhululekile. Musa ukuxhalaba, kungekhona kuphela abasebenzi abanolwazi olwenzayo ukuqhuba uqeqesho, kodwa abaqeqeshi-ukuqeqeshwa bahlala bekrakra. Enyanisweni, ndihlala ndihlaziywe ngabo bonke aba bantu abancinci, abanomdla kunye nabanobuchule abanokuqhubeka besebenza njengabacebisi kwiiNkampu eziliqela zasehlobo.
I-Santa Rosa yiNkwenkwezi kule mi Movie
I-Sonoma County Gay Pride 2016 - I-Russian River Gay Pride 2016
Kutheni ufuna ukutyelela uRaymond Winery eNapa Valley
Di Rosa Gcina
Umkhombandlela we-Sonoma Gay oNxweme - Isikhokelo seBodega Bay - I-Jenner Gay Guide
UBrian Brigid waseLildare - uMary of the Gaels
Ifama yaseHuber e-Starlight, e-Indiana
Izizathu ezisibhozo zoMzantsi Afrika kufuneka zibe kwiLuhlu lweBhakethi
10 iMilwaukee Imisebenzi yasehlobo
Ngaphakathi kwe-Atlanta: Porsha Thomas ye-Ladypreneur League
I-Skiing ehamba phambili kwiScotland
Iindaba Zeendaba Zomhlaba I-2017 Umboniso Uvakatyela eMontreal
IArizona Diamondbacks Baseball
Iziganeko zikaJune eLos Angeles